GRC Wormhole vokany-GRC Wormhole vokany-Nanjing BeiLiDa Vaovao ny Fitaovana ny Rafi-Injeniera Co., Ltd.
Vokatra GRC Wormhole
Eto ianao : Home>Product>GRC faran'izay farany>Vokatra GRC Wormhole
GRC (Miorina vita amin'ny vera fanamafisana) dia mampiasa feta simenitra ho fitaovana fototra, ary ampiasao ny fibre vera miaro amin'ny alàlan'ny alàlan'ny fanamafisana ny fahaizan'ny GRC. Ny fomba fanamboarana ny GRC dia karazana manokana. Mampiasà fiaramanidina mivezivezy hamafana ny fifangaroana ny simenitra sy ny fitaratra fitaratra ho ao anaty lasitra iray vita amin'ny préfabricate, afaka manatsara ny fitambaran'ny fahasalamanana sy ny tanjaka ary ny fanoherana ny famoahana ny vokatra mandritra ny fiantohana ny texture ny fitaovana.
Ny kalitaon'ny vokatra vokarina dia tsy mitovy amin'ny hafaingan'ny fandehanana mivaingana mahazatra. Any Eropa sy Amerika, fonosana GFRC tokana mitongilana be dia be no ampiasaina ho toy ny birao fananganana rindrina ivelany.
Ny fikajiana ny angovo sy ny fampihenana ny famoahana angovo: raha ampitahaina amin'ny firafitry ny rindrina hafa, ny GRC dia mandany angovo kely kokoa amin'ny dingan'ny famokarana sy fametrahana. Ny manam-pahaizana japoney dia nanao fampitahàna ny fandroahana karbônina teo anelanelan'ny rindrina GRC sy ny rindrina mivaingana nohamafisina, ary ny fampiasan'ny rindrina GRC dia mety hampihena ny famoahana karbona amin'ny 30%.